जीवनमा धेरै मानिसहरू अक्सर अरूको मदत चाहिन्छ भनेर परिस्थिति संग सामना गर्दै छन्। यस लेखमा हामी विज्ञापन सही छाप्न कसरी को प्रश्नको जवाफ हुनेछ। एक पेन र कागज को टुक्रा को सहायता आउनुअघि। सुन्दर चिल्लो हात मानिसहरू अनुरोध वा सुझाव लिखित र तिनीहरूलाई सडक मा पोस्ट गरेका छन्। अब 21 औं शताब्दीको अदालत र सबै कम्प्यूटरीकृत तर।
कम्प्युटर कसरी विज्ञापन छाप्न
एक कम्प्युटर, प्रिन्टर र कागज: वर्तमान मा वर्गीकृत सुन्दर बनाउन क्रममा, यो मात्र केही कुराहरू गर्न आवश्यक छ। यो विकल्प अन्तर्गत पहिले नै यो के तपाईंको हस्तलेखन, तपाईं आधुनिक कम्प्युटर कार्यक्रम र उपकरण प्रयोग गर्न मात्र क्षमता आवश्यक कुरा छैन। एक विज्ञापन प्रकाशित गर्न कसरी प्रश्न "वचन" लाग्छ कुनै एक कुनै समस्या हुनेछ। तपाईं बस पानामा मार्फत सुत्छन् र इच्छित चयन गर्न तपाईँको कम्प्युटरमा एउटा पाठ विज्ञापन टाइप गर्न, आवश्यक फन्ट आकार। म चाहन्छु कि मात्र कुरा ध्यान आकर्षित गर्न, त्यसैले यो पाठ सजिलै पढ्न सकिने र conspicuous हुनुपर्छ भन्ने छ।
धेरै प्रश्न ठीक पाठ फन्ट को चयन छ। अरूलाई सबै पाठ बोल्ड बनाउन गर्दा, एक उज्ज्वल रंग - केही मानिसहरू त्यो ठूलो, ठूलो, कसैले हुनुपर्छ लाग्छ। तर, यो गलत छ, तपाईं इच्छुक राहगीरों-अर्थमा विज्ञापन, भन्दा पाठ को उपस्थिति हुनुपर्छ। तसर्थ, हामी आकार र को विकल्प केही सल्लाह दिन सक्छन् फन्ट को प्रकार।
पहिले, यो पाठ को लागि औसत फन्ट आकार चयन गर्न आवश्यक छ। यो Italic बनाउन छैन उचित छ। दोश्रो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्दहरू तपाईं हाइलाइट गर्न केही तरिका आवश्यक छ। तपाईं अलिकति फन्ट बढाउन सक्छ, यो बोल्ड बनाउन, या केवल जोड गर्न। कुनै आवश्यकता पटकमा सबै संयुक्त गर्न, बस एउटा कुरा चयन गर्नुहोस्। यसरी, राहगीरों-द्वारा को दृश्य पहिलो महत्वपूर्ण शब्द मा पतन हुनेछ, र तिनीहरूले रुचि हो भने, त्यसपछि मानिसहरू सम्पूर्ण पाठ पढ्न हुनेछ।
रंग बारेमा सानो
यो आवश्यक छैन फरक रंग शब्द तर्कसंगत छैन आवंटित छ। मुद्रण विज्ञापन सामान्य कालो फन्ट छ। तथापि, तपाईं तरिका रंग को महत्व जोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी फरक कागज रंग लाग्न सक्छ। कुनै पनि शहर को पसलहरूमा विभिन्न रंग कागज फेला पार्न सजिलो छ, तर कार्यालय पहेंलो पानाहरू पनि छन्, त्यसैले तिनीहरू यो घोषणा महत्त्व हाइलाइट गर्न आदर्श हो। पाठ स्पष्ट हुनेछ, तर यो रीस उठाउनु छैन।
छाडा पात संग विज्ञापन कसरी छाप्न
तपाईं सडक मा आफ्नो जानकारी टाँस्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो फोन नम्बर, सम्पर्क गर्न सक्षम हुने प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। हो, तपाईं पाठ मा निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर राहगीरों-द्वारा सम्झना छैन, तर सधैं हात मा, त्यहाँ जो सम्पर्क विवरण लिखित सकिन्छ केहि छ। विशेष गरी यो लागि हामी पात आंसू गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी "वचन" मा एक विज्ञापन छाप्न हामी बुझ्न, सही छ, तर छाडा पात पाठ अलग अलि गरेको छ।
त्यसैले, मा कागजात खोल्न "वचन।" त्यहाँ सम्मिलित वा तालिका, आकर्षित यसलाई बन्द भताभुङ्ग गर्न सकिन्छ भनेर फोन नम्बर संग कागज को अलग टुक्रा बनाउन आवश्यक छ देखि। शीर्ष लाइन, हामी सम्पादन तालिका प्रयोग संयोजन (दायाँ माउस बटन थिचेर)। जहाँ हामी विज्ञापन प्रतिलिपि लेख्न र यो छ। अर्को, हामी दोस्रो लाइन जानुहोस्। एक सेल मा, हामी फोन नम्बर डायल र एक बिट विज्ञापन को अर्थ वर्णन गर्न मान्छे किन उनीहरूले यस सम्पर्क भूल छैन भनेर हुन सक्छ। त्यसपछि दायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस् र पाठ को दिशा चयन गर्नुहोस्। हामी यो ठाडो अवस्थित छ आवश्यक छ। अर्को, पाठ प्रतिलिपि र बाँकी कक्षहरू मा पेस्ट गर्नुहोस्। अब वर्गीकृत राम्रो र चिटिक्क लिन्छ, र फोन नम्बर, तपाईं फाड्न र केहि खराब बिना तपाईंसँग लाग्न सक्छ।
सबै भन्दा राम्रो स्थान
त्यसैले मुद्रण विज्ञापन कसरी गर्छन, हामी बुझ्न। अर्को चरणमा, प्रश्न उठ्छ, कहाँ तिनीहरू पेस्ट गर्नुहोस्। जसको लागि तपाईं आफ्नो विज्ञापन लेख्न पनि वस्तुहरु को स्थान छ गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, तपाईं ध्यान गर्नुपर्छ। संभावना छ रूपमा, तिनीहरू केवल ती नागरिकहरूले बस ठेगाना स्थान थाहा छ यदि वस्तुबाट निकट दूरी भएका वा रुचि हो, दिएको ठेगाना मा आफ्नो छडी देखि धेरै टाढा प्राप्त छैन। विज्ञापन अन्यथा रुचि एक राहगीर को दुर्लभ मामला लागि।
सामाजिक सञ्जाल वा वेबसाइटमा विज्ञापन वितरण
इन्टरनेट प्रविधिको विकास वर्तमान चरण मा, हामी जवान मान्छे को बहुमत इन्टरनेटमा सबै जानकारी खोज्दै छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। त्यहाँ कुनै पनि विषय मा मुद्रण विज्ञापन भन्दा सान्दर्भिक जानकारी dissemination लागि छिटो केही, साइटहरु केही विशिष्ट खण्डहरू छ। जहाँ यसलाई के गर्ने? कसरी विज्ञापन अनलाइन छाप्न?
त्यहाँ विज्ञापन नियुक्ति लागि धेरै साइटहरु छन्। पाठ को अर्थ आधारमा, (यसपछी खरिद, बिक्री र।) प्रासंगिक खण्ड मा राखिएको हुनुपर्छ। यसैले मान्छे आफ्नो विज्ञापन पाउनुहुनेछ। यी खण्डहरू साथै त्यहाँ परियोजना अरूलाई छन्। उदाहरणका लागि, गाडी, जनावर, सम्पत्ति, काम, आदि यी विषयहरू पनि सबैभन्दा उपयुक्त चयन गर्न र पहिले नै ठाउँ पाठ छ।
साइटहरु भुक्तानी र मुक्त गर्न सकिन्छ। अक्सर, साधारण मान्छे दोस्रो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्। भुक्तानी सेवाहरू एक प्रकारको पनि छ। उदाहरणका लागि, आफ्नो विज्ञापन को लागि क्रममा तपाईंले खोजी गर्दा पहिलो पृष्ठमा सधैं छ, तपाईं केही मात्रामा भुक्तानी गर्न आवश्यक छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं एक विज्ञापन रूपमा साइटको विज्ञापन पक्ष पोस्ट गर्न सक्छन्। संगठन अक्सर एनिमेटेड पाठ प्रयोग गर्नुहोस्।
कसरी राम्रो इन्टरनेटमा विज्ञापन गर्न? सबै साइटहरु मा, अपवाद बिना बेच वस्तुहरु को तस्वीर राखिएको गर्न सकिन्छ। त्यसैले, मानिसहरू वस्तु, यसको उपयुक्ततामाथि, रंग, आदि को राज्य देख्न आखिर, त्यहाँ तस्वीर हुँदा, तपाईंलाई तुरुन्त यो तपाईं को लागि वा उपयुक्त छ निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। र धेरै पटक कम गर्न अनावश्यक कल को संख्या।
साथै, आफ्नो विज्ञापन अब धेरै साधारण छन् जो सामाजिक सञ्जाल, राखिएको गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया निःशुल्क छ, तर जानकारी dissemination आफ्नो विज्ञापन चिनो एक विशेष तरिका छ जसले अन्य निर्भर हुनेछ।
तपाईं धेरै प्रयास बिना, हेर्न र खर्च गर्न सक्छन् रूपमा पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं विज्ञापन, आफ्नो जानकारी को आवास को प्रकार कसरी मुद्रण गर्न चयन गर्नेछ। यो मात्र इच्छुक मानिसहरूलाई प्रस्ताव कलको लागि प्रतीक्षा हुनेछ।
अत्यधिक डिस्क क्यास को 100%: के?
यदि मात्रा प्रतिमा हराइरहेको छ ...
शुरुआती लागि निर्देशन: Photoshop मा एक सफेद पृष्ठभूमि कसरी बनाउने
मशरूम देखि कावीयार - ठूलो खाजा!
रूटर डी-लिङ्क dir-300 कसरी जडान गर्न। फर्मवेयर, विन्यास, परीक्षण
खतरनाक टीबी लागि गर्मी चालू अवधि भने?
पुजारी मा बच्चा दाना: यो खतरनाक छ?
चिपके बीम देखि स्नान